30 taorian’ny fandripahana olona tao Tiananmen: Ny tantara misafotofoton’ny Andriamanibavin’ny Demaokrasia · Global Voices teny Malagasy
Nopotehin'ny fiara mifono vy ny tsangambato, nipoitra tany Hong Kong ny solony
Voadika ny 26 Mey 2019 5:29 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, polski, Français, русский, Türkçe, English
Andriamanibavin'ny Demaokrasia ao amin'ny kianjan'i Tiananmen tamin'ny taona 1989. Sary: Chan Ching-wah/Citizen News.
Ity lahatsoratra manaraka ity dia nosoratan'i Kris Cheng tamin'ny voalohany ary navoakan'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 19 May 2019. Navoaka indray tato amin'ny Global Voices araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty ny endrika nasiam-panovana.
Nijoro dimy andro tao amin'ny kianjan'i Tiananmen tamin'ny taona 1989 talohan'ny vono olona mihoso-drà tamin'ny 4 Jona ny andriamanibavin'ny demaokrasia.
Natao tao anatin'ny 3 andro monja ny sarivongana manana halavana folo metatra, izay miatrika ny sarin'i Mao Zedong, mihantona teo amin'ny vavahadin'i Tiananmen. Tsy azo lazaina ho olona iray no nahavita izany; fa mpianatra am-polony avy amin'ny toeram-pampianarana ambony enina momba ny zava-kanto, ny mozika, ny teatra no nandray anjara.
Rehefa vita ny sarivongana, dia efa ho folo andro i Beijing no tao anaty lalàna miaramila. Nilaza ny mpianatra sasany tamin'izany fotoana izany fa naniry hampiasa ny sarivongana ho fampaherezana sy hampiraisana ireo eny an-kianja.
Araka ny tantara avy amin'i Cao Xinyuan, iray amin'ireo mpanao sary sokitra, vita tamin'ny fotoana fohy toy izany ny sarivongana tamin'ny fampiasana “fomba fiasa tena akademika:
[…]It had been done originally as a demonstration of how the musculature and distribution of weight are affected when the centre of gravity is shifted outside of the body. This was the unlikely beginning from which the Goddess of Liberty and Democracy was to grow.
Nanapa-kevitra ry zareo hampifanaraka ny zavatra nataony ho fampiharana asa tany amin'ny studio izay efa nataon'ny iray tamin'izy ireo: sary sokitra tanimanga mirefy iray dia sy tapany mampiseho lehilahy miboridana mitàna andry amin'ny tanana anankiroa mitsangana sy miankina amin'izany.
[…] Natao izany tany am-piandohana ho toy ny fampisehoana ny fiantraikan'ny habokonana sy ny fizaran'ny lanja izany rehefa mifindra ivelan'ny vatana ny ivombesatra. Io no fiandohana tsy nampoizina nitomboan'ny andriamanibavin'ny Fahalalahana sy ny Demaokrasia.
[…] Notapahin'ny mpianatra ny ampahany ambany indrindra tamin'ny andry ary nanampy lelafo teo an-tampony mba hamadika azy ho toy ny fanilo; Naverin'izy ireo indray ho amin'ny toerana ambony kokoa ny vatana; Novain'izy ireo ho vehivavy ny tarehin'ilay lehilahy, ary nanampy nono, ary farany dia nandrakotra ny vatana manontolo tamin'ny akanjo.
Maodely voalohany ny andriamanibavin'ny Demaokrasia tamin'ny 27 May 1989. Sary: Tiananmen Duizhi.
Ny alin'ny 29 May tamin'io taona io, napetraka nizara efatra teo amin'ny kianja ny sarivongana ary nakambana tao anatin'ny 16 ora. An'hetsiny no nijery io dingana io.
Natao ny tolakandron'ny 30 mey ny fanolorana voninkazo tsotra sy ny lanonana fanokafana. Ireo izay nanatrika teo dia nihiaka hoe “Ho ela velona ny Demaokrasia” sy teny filamatra hafa, hoy i Cao, ary ny sasany nanomboka nihira ny ‘The Internationale’.
Mpianatra avy ao amin'ny Akademia Foiben'ny Mozika no nanao fampisehoana “Ode to Joy” avy amin'ny Symphonia faha-9 an'ny Beethoven, avy eo hira vahiny iray hafa sy hira Shinoa, ary nifarana tamin'ny The Internationale indray.
Tamin'ny fanambarana milaza ny fanokanana ny sarivongana, nilaza ireo mpamorona fa te hanokana azy ho an'ireo izay mitokona tsy hihinan-kanina, ho an'ireo ao amin'ny kianja, ho an'ireo mpianatra maherin'ny iray tapitrisa eny amin'ny anjerimanontolo ao Shina, ary ho an'ireo izay manohana azy ireo manerantany:
Na dia tsy voatahiry mandrakizay aza ny Andriamanitry ny Demokrasia namboarina tamin'ny vatosanga (platra) – dia mino isika fa hiala ny haizina ary ho avy ny maraina. [Manondro ny Andriamanitry ny Demaokrasia fa tsy andriamanibavy ny soratra tany am-piandohana.]
Mino tanteraka izahay fa rehefa tonga ny demaokrasia tena izy, dia hiverina any an-kianja isika mba hanohana ny Andriamanitra lehibe, goavana sy maharitra amin'ny Demaokrasia. Ho avy izany andro izany. Hametraka mandrakizay ny Andriamanitry ny Demokrasia ao am-pontsika ny vahoaka Shinoa .
Marina tokoa ny an'ny mpianatra fa vetivety ny fijoroany, saingy mety ho be fanantenana loatra momba ny hoavy koa ry zareo.
Tsy hanadino ny vahoaka, ​​nandrakitra izay nolazain'ireo mpianatra namorona ny sarivongana ny angona tatitra avy amin'ireo mpanao gazety ao Hong Kong izay nitantara ny hetsika demaokratika.
Mpianatra iray malaza amin'ny sary sokitra no nilaza tamin'ireo mpanao gazety ao Hong Kong fa nanao ny sarivongana izy ireo satria nila sary amin'ny endriny vaovao i Shina, sary iray mampiseho ny demaokrasia, ny fahalalahana, ny fitoviana, ary ny fandriampahalemana:
Ny andriamanibavin'ny Demaokrasia no hampiseho ny hevitry ny taranaka vaovao ao Shina. Mila miala amin'ny fomban-drazana taloha isika, ary manaisotra ny rafitra fitaizana feodalista.
Nilaza ny mpianatra iray nandray anjara tamin'ny fananganana ny sarivongana fa naka ny Sarivongan'ny Fahafahana (Statue de la Liberté) ao New York ho toy ny famantarana izany. Manana fanilo eo amin'ny tànany havanana sy boky miaraka amin'ny sary sokitra ny datin'ny fahaleovantenan'i Etazonia ny Sarivongan'ny Fahafahana. Samy mitàna ny fanilo ny tànana roa an'ny andriamanibavin'ny Demaokrasia ao Tiananmen.
Saingy tsy nanampò ny fihetsiky ny governemantan'i Beijing ny mpianatra. Hoy ny mpianatra iray tamin'izany fotoana izany:
Raha tsy miraharaha ny hevitry ny daholobe ny governemanta ary manimba an-katerena ny sarivongana, dia hampiseho fotsiny ny fahantran'ny manampahefana sy ny endriny tsy tia demaokrasia.
Fotoana fohy taorian'ny nananganana ny sarivongana dia nanambara ny komity mpitantana ny Tiananmen ao Beijing fa fanitsakitsahana ny fitsipika, ary koa “faniratsirana ny fahamendrehana sy ny endri-pirenena izany.” Nanonta lahatsoratra nandritra ny telo andro misesy nanakiana ny sarivongana ihany koa ny People’s Daily.
Rehefa nanafoana ny hetsi-panoherana tamin'ny 4 Jona ny tafi-panafahana ny vahoaka, dia nesorina haingana sy nopotehan'ny fiara mifono vy ny sarivongana. Saingy nipoitra vao haingana tao Hong Kong sy tany amin'ny toerana hafa ny solon'izany.
Ny “Andriamanibavin'ny Demaokrasia”. Sary: Catherine Lai/HKFP.
Natao amin'ny 18 Jiona 1989 ny kopia voalohany, araka ny filazan'ny Firaisan'i Hong Kong ho fanohanana ny hetsika demaokratika tia tanindrazana ao Shina, kopia namboarin'ireo mpanakanto folo sy mpianatra 60 avy ao amin'ny Akademian'i Hong Kong ho an'ny Zavakanto Fampisehoana. Natsangana izany mba ahafahan'ny mponin'i Hong Kong mitsidika ny Victoria Park ao amin'ny Causeway Bay ary misaona ny maty.
Tsy afaka nahita toerana maharitra ho an'io kopia io ireo mpamorona, ary – tamin'ny faran'ny taona 1989 – dia rava ilay izy.
Natao tamin'ny fiandohan'ny taona 1990 ny kopia hafa tamin'ny fefy vy, izay nampiasaina tamin'ny hetsika fahatsiarovana nandritra ny Fetibe Ching Ming, Fetibe Tapaky ny Mihintsan-dravina, ary nandritra ny fitsingerenan'ny vono olona ihany koa.
Saingy ny kopia nalaza indrindra dia mety ho ilay noforonina tamin'ny fibra fitaratra tamin'ny taona 2004. Manana halavana 2,4 metatra, nampiasaina nandritra ny fiareta-tory mandrehitra labozia nandritra ny fitsingerenan'ny vono olona izany.
Ny “andriamanibavin'ny demaokrasia” any Victoria Park, Hong Kong. Sary: Catherine Lai / HKFP.
Nisy kopia kely natao tamin'ny taona 2009 – tamin'ny faha-20 taonan'ny fitsingeran'ny vono olona – ary naseho ampahibemaso tao amin'ny Oniversite Polyteknikan'i Hong Kong.
Naseho tany amin'ireo tanàna any Taiwan, Etazonia, Kanada ary Aostralia ireo sarivongana mitovy amin'izany.
Ankoatra ny kopia, manana sarivongana andriamanibavin'ny Demaokrasia izay aingam-panahy avy amin'ilay natao tamin'ny taona 1980 i Hong Kong .
Tamin'ny taona 2010, Chen Weiming, mpanakanto teratany Shinoa avy any Nouvelle Zélande, nanangana sarivongan'ny Andriamanibavin'ny Demaokrasia, izay nalefa an-tsambo tany Hong Kong.
Nipoaka ny fifandirana rehefa nasehon'ny Fikambanana tao amin'ny faritra ho an'ny daholobe tao amin'ny toeram-pivarotana lehibe Times Square tao Causeway Bay tamin'ny 29 May ny sarivongana, raha nilaza ny manampahefana fa tsy manana lisansa “fialamboly” ilay sarivongana. Tonga ny polisy ary nanala izany.
Taorian'ny faneren'ny vahoaka, niverina tao amin'ny Alliance ny sarivongana ary naseho tao amin'ny Victoria Park.
Nanomana hamindra ny sarivongana ho ao amin'ny toeram-pianarana ny sendikan'ny mpianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Shina ao Hong Kong, saingy tsy neken'ny fiadidian'ny sekoly. Na izany aza, an-jatony no nitondra ny sarivongana tao amin'ny toeram-pianarana taorian'ny fiareta-tory mandrehitra labozia fanao isan-taona, ary nijanona tao hatramin'izao izany.
Ny sarivongana Andriamanibavin'ny Demokrasia miditra ao amin'ny oniversite Shinoa ao Hong Kong tamin'ny taona 2010. Sary tahiry: Apple Daily.